Ndivanaani Vachaenda Kudenga?​—Vanhu Vose Here? | Mibvunzo yeBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Mizo Moore Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Uzbek Venda Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Ndivanaani vachaenda kudenga uye vachaenda kunoitei?
Mamiriyoni akawanda evanhu anoda kuenda kunogara kudenga. Jesu akati vaapostora vake vakatendeka vaizonogara kudenga. Asati afa, Jesu akavavimbisa kuti aizovagadzirira nzvimbo kudenga kuna Baba vake.—Verenga Johani 14:2.
Sei vanhu vachizomutswa kubva panyika kuti vanogara kudenga? Vachanoitei ikoko? Jesu akaudza vaapostora vake kuti vaizova madzimambo. Vachatonga nyika.—Verenga Ruka 22:28-30; Zvakazarurwa 5:10.
Vanhu vose vakanaka vanoenda kudenga here?
Munyika dzakawanda, vanhu vashomanana chete ndivo vanotonga. Sezvo Jesu achimutsa vanhu kuti vanogara kudenga kuitira kuti vazotonga nyika ino, taizotarisira kuti vanosarudzwa vacho vave vashoma. (Ruka 12:32) Bhaibheri rinotaura nhamba yevachatonga naJesu.—Verenga Zvakazarurwa 14:1.
Jesu akagadzirira vamwe vateveri vake nzvimbo kudenga. Unoziva here kuti vachanoitei ikoko?
Asi vaya vanoenda kudenga havasirivo chete vachapiwa mubayiro. Vaya vanozviisa pasi peUmambo hwaJesu vachanakidzwa neupenyu husingaperi muparadhiso panyika pano. (Johani 3:16) Vamwe vachapinda muParadhiso pashure pokunge vapona pachaparadzwa vanhu vakaipa. Vamwe vachapinda kana vamutswa kubva kuvakafa.—Verenga Pisarema 37:29; Johani 5:28, 29.
Denga Upenyu Uye Rufu
Vanhu vakawanda vanoziva Munyengetero waShe. Ko mashoko ekuti “Umambo hwenyu ngahuuye,” anorevei?
Chii Chinonzi Paradhiso?